Ahoana no hanatsarana ny lisitra vokariko amin'ny Amazon amin'ny teny search?
Ny lisitry ny lisitra amin'ny Amazon sy ny fikarohana teny dia angamba ireo sehatra roa manan-danja amin'ny fifaninanana. Midika izany fa ny kalitaon'ny lisitry ny lisitrao, ny famariparitana ny vokatrao sy ny andianà bala momba ny soso-kevitrao - izy rehetra dia miova amin'ny fisafidianana ny teny sy ny fampiasana azy manokana. Noho izany, azonao atao ny manalavitra ny mpifaninana amin'ny Amazon amin'ny alalan'ny fikarohana teny amin'ny fomba mahomby. Ary dia hasehoko anao ny safidy tsara sasantsasany mba hitsambikina amin'ny fikarohana momba ny fikarohana momba ny ecommerce-oriented sy ny lisitry ny fanatsarana.
Fa alohan'ny hanombohantsika, manoro fanamarinana indroa aho mba tsy hisongadina ireto olana manaraka ireto:
ary ny teboka bala dia tsy manan-karena amin'ny teny fanalahidy sy ny andalana maitso lava.
Ireo sehatra voalaza rehetra dia toa maneso loatra amin'ny teny fanalahidy, ka mahatonga ny zava-drehetra ho resy.
Raha tsy ampy ny sary na ny votoatin'ny sary vongan-tsary (mariho fa miaraka sary iray na roa monja isaky ny vokatra dia tsy ho tonga na oviana na oviana ianao - aoka hatrehintsika izany).
Tsy ampy ny fampahalalam-baovao manan-tantara ao amin'ny fizarana misy ny famaritana vokatra na bala.
Raha vantany vao azonao antoka fa ny zava-drehetra dia eo amin'ny toerana misy ny lisitry ny vokatrao, dia fotoana ahitanao ny fahafaha-manantena fahafinaretana ao Amazon amin'ny alalan'ny fikarohana teny. Amin'izany fomba izany, dia mila maka sary lehibe amin'ireo teny fototra lohahevitra ampiasain'ireo mpifaninana akaiky indrindra ianao. Etsy andaniny anefa, ilaina ny mahatakatra ny fironana marina amin'ny teny search Amazon mba hahazoana ny ankamaroan'ny fangatahana lava ampiasain'ny mpivarotra mivelona any. Indreto rehefa miditra an-tsehatra ireo fitaovana rindrambaiko sokajy manokana! Anisan'ireo karazana safidy maro isan-karazany, azoko atao ny manoro ireo fanampiana an-tserasera roa manaraka miaraka amin'ny fahombiazan'ny fampiasana.
Teny soa ho an'ny teny Amazon amin'ny teny finday. Izany dia afaka manampy anao hanohy hanatsara ny pejy vokatrao mba hahafahan'izy ireo mifanaraka amin'ireo fangatahan'ireo mpanjifa. Farany - mba hajaina eo an-tampon'ilay fikarohana sahaza. Manandrama teny Merchant mba hahatakaranao tsara ny dikan'ny teny hoe volavolan-dalàna indrindra ho anao. Mariho fa io safidy io dia natao manokana ho an'ny sehatra ecommerce sy ny orinasam-pandefasana mivantana indrindra. Ao anatin'ireo sehatra matanjaka indrindra, ny fitaovana dia manangona ireo teny fanalahidy ampiasaina indrindra fa tsy ao Amazona ihany fa manangona fehezanteny avo lenta amin'ny toerana hafa toa an'i Jet sy Walmart.
Afaka ny ho lasa namana tsara amin'ny mpivarotra enti-mody amin'ny Amazon. Ankoatra izany - ity fitaovana sy fitaovana fikarohana ity dia mampiseho ny hery fara-tampony rehefa mila fahaiza-misaina manan-kaja ianao. Raha tsorina dia afaka manampy anao hahita ny tsara indrindra amin'ny teny fototra sy ny andian-teny fikarohana ireo mpivarotra amina amboara Amazon. Amin'izany fotoana izany, ity fitaovana ity dia afaka maneho anao ireo teny fanalahidy izay mety hanome anao soso-kevitra mety amin'ny teny fanalahidy malaza mety ho mendrika ny fisainanao mazava tsara amin'ny fotoana. Manana endri-panampiana tsy manam-paharoa ihany koa ny scope izay ahafahana manatsara ny fampielezan-kevitry ny PPC mba hahafahan'izy ireo mihazakazaka amin'ny tanjona ambony indrindra. Noho izany, aza misalasala ny manandrana ary jereo ny zavatra niches miandry fotsiny ny lisitra vokarinao tsara indrindra Source . Mirary anao ho tsara vintana!